Android - Wallpaper amin'ny biby | Androidsis
Sintomy ny tsara indrindra sary an-tsary biby ho an'ny Android-nao. Raha maniry biby fiompy ianao, eto dia hahita sary an-tsokosoko isan-karazany misy karazana biby ianao mba hahafahanao misafidy ilay tianao indrindra.
Ny safidin'ireo sary ho an'ny Android dia goavana. Fa raha liana amin'ny fiaviana biby ianao dia ity no faritra misy anao. Ao anatin'izany no hahitanao ny sary an-tsary tsara indrindra miaraka amin'ny biby. Manomboka amin'ny biby fiompy mahafatifaty indrindra ka hatramin'ny bibidia mahatalanjona indrindra. Ny zava-drehetra hanova ny fisehon'ny telefaonanao amin'ny fomba tsotra indrindra.
Amin'ity fizarana ity dia ho hitanao ny vola tsara indrindra ao anatin'ity sokajy ity. Ka raha biby no tianao dia tsy tokony halahelo ny fisafidianana tsara indrindra ho an'ny finday Android ianao.
Raha mila bebe kokoa ianao sary an-tsary finday, aza misalasala mitsidika ilay rohy izay navelanay fotsiny.